Capricorn Mwana: Capricorn Musikana & Mukomana Maitiro & Hunhu | Zodiac Zviratidzo zveVana - Zodiac Zviratidzo
Tarot Kadhi Zvinoreva
Capricorn Mwana: Hunhu, Hunhu & Hunhu
Iko kune dzidziso yekuti tese tiri vana venyeredzi. Kuti maatomu mumiviri yedu akagadzirwa kubva kune nyeredzi dzekare.
Kunyange izvo zvingangoita kana kuti zvikasaitika kuva zvechokwadi, zvakavakirwa uye zvichiteerana nemasikirwo ndeyeCapricorn kuti ivo vanogona chaizvo kuzove vana vechokwadi vaAmai Gaia.
leo murume uye taurus kuenderana kwechikadzi
Seizvo Gaia anotigarira mudumbu rake - achititarisa nekunyemwerera kunoziva uye nekumirira nemoyo murefu patinowana nzira dzedu dzehungwaru - iyi, zvakare, ndiyo nzira yemwana weCapricorn.
Capricorn Mwana Tafura yezviri Mukati
Dzokera kune vese Vana Astrology & Zodiac Zviratidzo
Capricorn Mwana Hunhu, Hunhu, & Hunhu
Kunyangwe sevana veCapricorn ndiyo isingazungunuke, hwaro husingabatike hwemhuri.
MaCapricorn anouya munyika ino nepfungwa dzakakura kupfuura muviri wavo.
Vashandi veChiedza vanotitaurira kuti mizhinji mweya yekare inotarisira zvakawanda kubva mukuberekwa uku.
Izvi zvinoreva kuti mwana wako wemuCapricorn anogara achiedza kuita nepese paanogona napo, uye anozviranga nemoyo wese nekuda kwekukanganisa kwaanoona.
Chishuwo chekukwana chinomhanya zvakadzika mumweya wembudzi. Vanoziva kuti vakazvarwa kuti vasvike pamusoro pegomo kana kufa vachiedza.
Usavatukire kana kukundikana kukasimudza musoro wayo wakashata (vanozvirova pachavo zvakakwana). Asi, vayeuchidze kuti kudzidzira uye kushanda nesimba zvinotungamira mukubudirira kwavanoshuvira.
Zvakare usazvidya moyo kana yako shoma Capricorn ichiita wega kuedza. Ivo vanoda kuti zvirinani kuedza kugadzirisa zvinhu vega. Kana vazvimbirira, vanodzoka vachitsvaga mazano vasina kumanikidzwa.
Mwana wako weCapricorn anoda kusagadzikana. Havadi kuchinja zvikoro kana kufamba, asi vanonamata tsika. Kuenderera mberi mune ino purogiramu yemwana ndiko kunyaradzwa kwavari. Haufanire kunetseka nezvekuve nepurogiramu uye kuomerera pairi.
Chaizvoizvo, vangangoyeuchidza iwe!
Munguva yekudzikira nguva yako Mbudzi diki ichave yakawanda kupfuura kugutsikana kuenda kunze uye kuzvivaraidza pachavo nemiti. Kana iri mune shamwari, zvese zviri nani.
Zvisikwa inzvimbo yekutamba yeCapricorn. Kuva kunze kunovariritira uye kunovazadza, uye zvakare kwaanodzokera kana achida kufunga kana kugadzirisa shanduko.
Usashamisika kuona mwana wako weCapricorn achikwezva kumitambo. Ivo vane chinzvimbo uye vanoda kufamba. Kumhanyira kuenda nekudzoka kuchikoro pane kutora bhazi kwaisazotishamisa.
Kana vasingabatanidzwe mukunakidzwa, vanogutsikana kuve nemapato evabereki. Taura 'tora mwana wako kuti ashande' zuva uye tarisa maziso avo kupenya. Vangazviwanawo vachikwezva kumimhanzi ine mutsindo wakasimba.
Sezvo mwana wako anokura iwe unozotanga kucherechedza maitiro kune akasimba kwazvo maitiro ekushanda. Izvi zvakajairika kuCapricorn yako, asi dzimwe nguva zvinoda kuyeuchidzwa kutamba.
Kushingairira kwavo kunovadya uye vasati vaziva kuti maawa anopfuura. Sanganisa izvozvo neCapricorn's ambitious streak uye wozozviwana uine mwana akatsiga, anobereka zvakanyanya.
Nechinhu chePasi chinotonga mbudzi yako diki, vanosvika hupenyu sechibvumirano chebhizinesi Vanosarudza kufunga kune manzwiro uye vanowanzo kuratidza huchenjeri hunoshamisa kune avo vane nzeve yekuteerera. Sanganisa izvi pamwe nehungwaru uye fungidziro, uye zvechokwadi une mwana anofadza pamaoko ako!
Chinhu chimwe chinoonekwa nevabereki veCapricorn musikana nekukurumidza paanokura hunhu ndechekuti iye chaiye haasi 'mwana'.
Capricorn vanozvarwa vachiita uye vachitaura sevanhu vakuru.
Uye sekune vakawanda vakuru, izvo zvakare zvinoreva kuti wako Mwanasikana weCapricorn anogona kuratidza kuomarara uye kumisikidza munzira dzake kunyangwe semwana mudiki. Kana adenhwa anoisa musoro pasi sembudzi yagadzirira kuchaja nenyanga dzichipisa.
Musikana weCapricorn anotsanangudza zvakare pfungwa yekuchinja. Nguva zhinji iye anofara uye asina hanya, asi kune rimwe divi kumufananidzo uyu. Iyo melancholy Capricorn chinhu chinosuruvarisa kuona.
Iva wakagadzirira kumupa rwakawedzerwa rudo uye kutarisisa panguva dzino dzepasi. Chaizvoizvo, kune akawanda mamwe maitiro akanaka mumwanasikana wako weCapricorn zvekuti ichi chidiki hitch hachina kuwanda.
Haatombonetseke peevishness kana kugadziridzwa kwepamusoro, uye haakurwe newe pamusoro pechisarudzo chako chewadhirobe, kutamba zvinhu kana kunyange kudya kwemanheru.
Wako musikana weCapricorn anofarira kuronga. Muregei ari mupurasitiki ware kana simbe Susan!
Mabasa akaita seichi anodyisa iyo yakasikwa Capricorn chishuwo chekuti nharaunda yake ive pasi pesimba rakazara. Iye zvakare anokoshesa kuve neyakajairika maitiro kunyanya mangwanani. Kana kukanganiswa kushomeka kwekuenderera kunoisa chokwadi-tsoka-mbudzi kubva pachiyero.
Kukura kwemwanasikana wako zvinoreva kuti akasununguka kukwezva vana vakuru nevanhu vakuru seshamwari. Kukwanisa kwake kutaura pasiteji imwechete sevanhu ava kunoita kuti vaviri vacho vabudirire. Kamwe kana Capricorn ikasarudza shamwari yavanobatirira zvakasimba, kazhinji vachiramba vachikurukura kwemakore anouya.
Panguva yekutamba mwanasikana wako anofarira kuita chinhu chaanonzwa kuti chine chinangwa. Anoda kuisa putter mubindu pane kutamba tag chero zuva. Muchokwadi, iyo gadheni inzvimbo yakanakisa yekumisikidza yakakosha nzvimbo kwaari nechigaro, yemamiriro ekunze cubby yemabhuku aanofarira etc. Iye anoshandisa nzvimbo iyoyo kune zvese kubva pakudzidza kusvika mukufungisisa zvakavanzika zvehupenyu.
Kuchikoro musikana wako weKapricorn anofanira kuita zvakanaka, asi dzimwe nguva anogona kupotsa nguva dzakatarwa. Izvi zvinodaro nekuti iye ane yake pfungwa nezve nguva uye nzira. Anochenjerera, saka zvinhu zvinotora nguva yakareba kupfuura zvavangangodaro. Kunyange zvakadaro mwana uyu anotora mabasa ake zvakanyanyisa uye haadi kuramba achingogunun'una kuti apedze mabasa.
sagittarius mukadzi uye aries murume kugarisana
Panguva yaanozove muyaruka uchaona musikana anonyatsokoshesa tsika dzakanaka. Iye akavimbika uye akavimbika pasina kuzvitutumadza pamusoro pazvo.
Anogona kutora nguva yekudziya muhukama hutsva (pane zvishoma maruva emadziro pano), asi kana achinge akasununguka kungwara kwake uye kukura kwake kunopenya zvakajeka.
Mwana mukomana anonzi Capricorn anoshuvira kuchengetedzeka. Iye anokoshesa vabereki vanoratidza chiremera chinoremekedza uye vasinga 'dumbure pasi' hurukuro dzavo. Zvakafanana nemusikana weCapricorn, vakomana vanozvarwa vakura.
Havana kumboita kunge mwana mudiki. Panzvimbo pekuti mvere dziunganidze mukomana wako weCapricorn anofungisisa zvinangwa zvake uye nemaitiro ekuzviunza muchokwadi.
Kunge Mbudzi chiratidzo ichi chinoratidza, mukomana wako mudiki anozove anobudirira kwazvo asi asingakanganwi mhuri. Anoratidzika kunge ane tsoka mune zvese zvaanoedza. Hazvina mhosva kuti anotangira papi rwendo rwake mugomo, anosvika pakakwirira nekukurumidza kupfuura vezera rake. Panguva yose iyi mwanakomana wako anoti akaumbwa asina shangu yeshangu kunze kwenzvimbo sekunge anga afamba ichi zana nguva dzakapfuura.
Chinhu choga chinozunza chiyero cheCapricorn ndipo pavanonzwa vachimiririrwa kana kusekwa. Izvo zvinomugogodza kubva pamutambo wake, dzimwe nguva kwemavhiki. Muyero wakanaka wekutenda kubva kumayuniti evabereki unogona kubatsira zvakanyanya munguva dzino.
Mumagadzirirwo eboka mwanakomana wako wemuCapricorn ndiMr. Anonakidzwa nezvinhu zvakanakisa muhupenyu uye anotonzwisisa kuti hunhu uye chitarisiko chakachena ndiyo imwe nzira yekuratidza zvinhu izvozvo. Kunyangwe vese vakapfeka, zvakadaro; panosara mweya wekusava nechokwadi nezvekukwezva kwake.
Muyeuchidze iye kuti akanyatso dapper uye chivimbo chinozununguka chinodzokera kudombo-rakasimba.
Chinhu chimwe chinoshamisira nezvevakomana veCapricorn ivo vakachena!
Kusiyana nevakomana vazhinji vasina kana kucherechedza masokisi avakapfeka ane mavara akasiyana, imba ino yechiratidzo chezuva inogara ichitaridzika kuva yakashambidzika uye yakarongeka.
Iyo Capricorn mantra 'inzvimbo yezvinhu zvese'.
Usaende uchisungisa zvinhu zvemwanakomana wako kutenderedza kunyangwe iwe usinganyatsonzwisisa marongero aakasikwa. Iyo inzvimbo yekunyaradza yeiyo Earthy Capricorn uye kuitarisira iko kunopa kudada.
Capricorn Chokwadi & Metaphysical Associations
Mazuva eKapricorn: Zvita 21- Ndira 19
Capricorn Chiratidzo: Gungwa-Mbudzi
Mutsara wakakosha: 'Ndinoshandisa'
Capricorn Nyika: Saturn
Capricorn Dombo rekuzvarwa: Bhuruu Topazi (Zvita); Garnet (Ndira)
Nhamba Vibration Kuverenga nhamba: 8
Capricorn Element: Pasi
Capricorn Ruva: Carnation
Ruvara rweCapricorn: Rima Girinhi & Rima Bhuruu
Zuva reCapricorn: Mugovera
Chakra: Mudzi kana Base (Muladhara)
Zvinonakidza Chinese Zodiac Twin: Ox
Tarot Kadhi Sangano: Dhiyabhorosi (Capricorn), Nyika (Saturn)
Kuporesa Makristasi: Agati, Amethyst , Ziso reKat, Garnet, Quartz , Ruby , Turquoise
Akakurumbira Capricorn: Janis Joplin, Richard Nixon, Michelle Obama, Champ Mohamed Ali, Kate Middleton, Denzel Washington
scorpio murume uye aquarius mukadzi hushamwari
kenza uye sagittarius zvinoita mutambo wakanaka
mapuraneti mangani ari neptune kubva kuzuva
ita gemini necancer zvinoenda pamwechete